FIPARITAHAN’NY LAZA ADINA BAKALOREA: Olona 43 no voasambotra · déliremadagascar
FIATREHANA NY FIHIBOHANA : Mitohy ny fanampiana ataon’ny fikambanana SIF ireo mpatory an-dalana sahan’ny ministeran’ny mponina
MISS MADAGASCAR 2020: Ho tanterahana amin’ity volana jolay ity ny famaranana lehibe
FIPARITAHAN’NY LAZA ADINA BAKALOREA: Olona 43 no voasambotra
Socio-eco	 10 octobre 2019 R Nirina
“Aoka ho samy ho tony”. Efa misy ny fandaminana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena mandritra ny fanomanana ny fanadinana bakaloera “session » faharoa. Na eo amin’ny fiarovana ny toerana natokana handrafetana ny laza adina na ny fitaterana izany manerana ny foibem-panadinana dia hohamafisina ny fandraisana andraikitra eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. “Mampitandrina sahady ireo te hinia hanakorontana mandritra ny fiomanana sy ny fizotrany fanadinana” sy manentana ny rehetra ho tony ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa.
Nampahafantariny nandritra tafa ho an’ny mpanao gazety androany 10 oktobra 2019 fa mitohy ny fanadihadiana momba ireo tomponandraikitra tamin’ny fanaparitahana ny laza adina. Raha tatitra nataony dia toerana efatra no nahitana io fiparitahana io: Antananarivo, Imeritsiatosika, Fianarantsoa, Ihosy. 43 kosa ny olona efa voasamboatra izay ahitana mpampianatra sy mpianatra. Araka ny fanazavany dia enina amin’izy ireo notanana am-ponja vonjimaika, ny 20 nomena fahalalahana ary ny sivy tsy mahazo miala lavitra ny tanana.
Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa
FIATREHANA NY FIHIBOHANA : Mitohy ny fan...
MISS MADAGASCAR 2020: Ho tanterahana ami...
FIATREHANA NY FIHIBOHANA : Mitohy ny fanampiana ataon’ny fikambanana SIF ireo mpatory an-dalana sahan’ny ministeran’ny mponina 7 août 2020
MISS MADAGASCAR 2020: Ho tanterahana amin’ity volana jolay ity ny famaranana lehibe 6 juillet 2020